८ बर्ष पछि बल्ल धुलिखेलबाट पक्राउ रामहरि – Classic Khabar
८ बर्ष पछि बल्ल धुलिखेलबाट पक्राउ रामहरि
October 22, 2021 83
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कर णीका कसुरदारलाई आठ वर्षपछि धुलिखेलबाट पक्राउ गरेको छ । कर णी मुद्दामा १० वर्ष सजाय फैसला गरिएका बेथानचोक गाउँपालिका–४ का ४५ वर्षीय रामहरि राउतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
राउतलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७० भदौ २६ गते १० वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो । कैद फैसलापश्चात फ’रार रहेका राउतलाई धुलिखेल नगरपालिका–७ बाट पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार पक्राउ परेका महतलाई कानुनबमोजिम कैद तथा जरिवाना फस््र्योटका लागि जिल्ला अदालत धुलिखेलमा पेश गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा अदालतबाट प्राप्त लागतमा फरार रहेका प्रतिवादी खोजतलासका क्रममा महत पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रहरी अधिकृतको नेतृत्वमा फरार प्रतिवादी खोजतलास अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
Prevप्रधानाध्यापक र १६ वर्ष देखि एउटै स्कुलमा कार्यरत शिक्षिकाको निधनमा बिद्यालय बन्द
Nextसुँगुरको मिर्गौला मानिसमा प्रत्यारोपण
दुर्गेश थापा के हो यो ख्यास्स पुतली भनेको ? चेलीबेटिले तीज मनाउन पाएनन भनेर किन खुशी भाको दुर्गेश ? (भिडियो सहित)
नेपालमा आज संक्रमण र मृत्युको नयाँ अपडेट : यति धेरैको मृत्यु, डब्लूएचओले पनि दियो यस्तो प्रतिकृया
सीता भण्डारीको अनुस,न्धानमा आयो कसैले नसोचेको मोड, सिताको ह,त्या कि आ,त्महत्या ? भेटियो प्रमाण-भिडियो सहित